रोजगार समाचार सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले विभिन्न पदमा माग्यो कर्मचारी
काठमाडौँ, ५, जेठ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । लघुवित्तले नायब कार्यकारी प्रमुख, सहायक प्रबन्धक,...
एनआईसी एशिया लघुवित्तमा रोजगारीको अवसर
काठमाडौँ, ४, वैशाख । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले भारी संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको छ । लघुवित्तले उप प्रदेश प्रमुखमा...
सिटिजन्स बैंकले विभिन्न पदमा माग्यो कर्मचारी, कहिलेसम्म दिन सकिने आवेदन ?
काठमाडौँ, ३, जेठ । सिटिजन्स बैंकले विभिन्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले इन्फरमेसन टेक्नोलोजीमा डेपुटि म्यानेजर हेड आइटीका...
काठमाडौँ, २८, वैशाख । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १० जना कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले ट्रेनी असिस्टेन्टका लागि १० जना...
काठमाडौँ, २८, वैशाख । समृद्धि फाईनान्सले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न जिल्लामा रहेको शाखा कार्यालयको लागि...
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले माग्यो कर्मचारी, शैक्षिक योग्यता कति ?
काठमाडौँ, २६, वैशाख ।एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले प्रशिक्षार्थी सहायक पदका लागि उम्मेदवार माग गरेको...
प्रभु बैंकमा रोजगारीको अवसर, आवेदन कहिलेसम्म ?
काठमाडौँ, २६, वैशाख । प्रभु बैंकले कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । बैंकले...
समता घरेलु लघुवित्तद्धारा विभिन्न पदमा कर्मचारी, एसईई उत्तीर्णसम्मका लागि आयो अवसर
काठमाडौँ, १६, वैशाख ।समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग...
वैदेशिक रोजगारीको नाममा शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीबाट ठगीको धन्धा बढ्यो
काठमाडौँ, १५, वैशाख । वैदेशिक रोजगार विभागले आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको नाममा शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सीबाट ठगीको धन्धा व्यापकरूपमा बढेको बताएको छ । राजधानीमा...
सिभिल क्यापिटल मार्केटले विभिन्न्न पदका लागि माग्यो कर्मचारी,कहिलेसम्म दिन सकिने आवेदन ?
काठमाडौँ, १५, वैशाख । सिभिल क्यापिटल मार्केटले विभिन्न्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । क्यापिटलले हेड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टका लागि...
ग्लोबल आइएमई बैंकले माग्यो कर्मचारी, आवेदन कहिलेसम्म दिन पाइने
काठमाडौँ, १४, वैशाख ।ग्लोबल आइएमई बैंकले कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले सिनियर अफिसर र अफिसरका लागि केही सङ्ख्यामा कर्मचारीको...
स्वरोजार लघुवित्तमा विभिन्न पदमा कर्मचारी माग, शैक्षिक योग्यता र आवेदन अवधी कति ?
काठमाडौँ, १२, वैशाख ।स्वरोजार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले एक सूचना प्रकाशित गर्दै...
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र जान चाहनेलाई तालिम
काठमाडौँ, २२, चैत । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र जान चाहने व्यक्ति तथा परिवारका लागि वित्तीय साक्षरता र...
सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग
काठमाडौँ, १४, चैत । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका एक दर्जन कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो पटक राजिनामा दिनेहरुमा विभागीय प्रमुखसमेत...
महालक्ष्मी विकास बैंकमा रोजगारीको अवसर, आवेदन कहिलेसम्म दिनुपर्ने ?
काठमाडौँ, ३, चैत ।महालक्ष्मी विकास बैंकले विभिन्न पदमा कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले असिस्टेन्ट म्यानेजर, डेपुटी म्यानेजर र म्यानेजरका लागि...
महालक्ष्मी लाइफले विभिन्न पदमा माग्यो कर्मचारी, कहिलेसम्म दिनसक्ने आवेदन ?
काठमाडौँ, २, चैत । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले अकाउन्ट फाइनान्स, रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टका लागि...
एनएमबि लघुवित्तमा रोजगारीको अवसर
काठमाडौँ, २,चैत ।एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्मचारीको माग गरेको छ ।कम्पनीले कनिष्ठ सहायकका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । ईच्छुक तथा...
किसान लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी, शैक्षिक योग्यता कति चाहिने ?
काठमाडौँ, ३०, फागुन ।किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले सहायक अधिकृत रअधिकृतमा केही संख्यामा र...
एनआइसी एशिया लघुवित्तमा कर्मचारी माग, संख्या कति ?
काठमाडौँ, २९, फागुन । एनआइसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले ३ पदमा कर्मचारी माग...
प्राइम लाइफले माग्यो भारी संख्यामा कर्मचारी, शैक्षिक योग्यता र आवेदन अवधी कति ?
काठमाडौँ, २९, फागुन ।प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले भारी संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले एक सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न पदमा...